Fampandrosoana… fiainam-bahoaka | NewsMada
Par Taratra sur 09/11/2021
Tsy misy distrika hadino amin’ny hoe fampandrosoana ifotony amin’izao? Tsy misy fitsaharana, ohatra, ny fanorenana fotodrafitrasa: hopitaly manara-penitra, sekoly manara-penitra, tsena manara-penitra, kianja manara-penitra… Inona na ahoana koa? Misy ny efa notokanana, ao ny an-dalam-pamitana, tsy latsak’izany ny mbola kasaina. Be lavitra no ho izay natomboka sy vita mandrakariva ny tokony hatao.
Eo ihany izany, saingy mifanaraka sy maharaka izany ve ny fiainam-bahoaka ankapobeny? Na ny fari-piainana, na ny fomba fiaina… Ahina sy atahorana mandrakariva, ohatra, ny fanimbana sy fangalarana zavatra amin’ireny fotodrafitrasa ireny noho ny fahantrana, tsy fahaiza-miaina, tsy fijerena lavitra sy tsy fitsinjovana ny hafa amin’ny fananana sy fitantanana soa iombonana… Ho sasatry ny manorina sy manarina?
Ilaina ary tsy azo ihodivirana ny fampandrosoana ny maha olona sy ny olona manontolo, raha tena tiana hiorina sy haharitra izay atao. Ho mora simba hatrany, ohatra, ny arabe na tsara toy inona aza, raha mbola tsy mifanaraka amin’izany izay atao aminy: fitondrana sarety kodiaram-by, fanondrahana ranon-dolana noho ny fivarotana hani-masaka… Manginy fotsiny amin’izany ny fahalotoana sy ny fisavoritahana.
Mila fanorenana sy fanatsarana miara-dalana amin’ny fampandrosoana amin’ny alalan’ny fanorenana fotodrafitrasa ny fampivoarana miandalana ny fiainam-bahoaka: fomba fiaina, fomba fisaina… Vahoaka liam-pandrosoana sy vonon-kandroso izany. Noho ny fahantrana lalina sy maharitra, misy karazana olona tsy te handroso, sanatria? Na tsy mahalala sy tsy mahay manatsara ny fiainany sy ny fisainany.
Hiova ho azy amin’ny karazana fotodrafitrasa manara-penitra ve ny fiainana raha mbola ao anatin’ny fahantrana? Mety miara-dalana amin’izany ny tsy fahalalana, ny tsy fahaiza-miaina… Aza tezi-dresaka! Ny olona no manova ny zava-misy sa ny zava-misy no manova ny olona? Na manery hiala amin’ny fahantrana ny fanorenana fotodrafitrasa, na ny fahantrana no manery amin’ny fanorenana fotodrafitrasa…